Amaphuzu ambalwa adinga ukunakwa ekwakhiweni kwephansi ebusika bePVC - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Amaphuzu ambalwa adinga ukunakwa ekwakhiweni kwephansi ebusika bePVC
Qala ulinganise izinga lokushisa lomhlaba esakhiweni sezokwakha. Uma lingaphansi kuka-10 ° C, akukho ukwakhiwa okungenziwa; amahora angu-12 ngaphambi nangemva kokwakhiwa, izinyathelo zokusiza ezidingakalayo zingathathwa ukugcina izinga lokushisa langaphakathi ngaphakathi kwe-10 ° C; Usimende ozilinganiselayo kufanele uhlolwe amandla ngokuhambisana nezidingo zokwakha ngemuva kokulashwa ngokuphelele.
1. Uma inhlabathi imanzi, kungadala ukuthi usimende wokwehla kwamakhaza womile ngokunganele.Ukubheka ukuthi isisekelo sokuzilinganisa kwesimende somile ngokwanele yini, okuqukethwe komswakama kuyadingeka ukuthi kube ngaphansi kuka-4,5%.
2. Izinga lokushisa eliphansi lomhlaba lingadala ukuthi amandla kasimende wokuzilinganisa aqinise anciphe.
3. Ngenxa yokushisa okuphansi kwendlu, ezinye izinkomba zomzimba noma zamakhemikhali zokunamathela zingathinteka.
4. Izinga lokushisa eliseduze nokungenwa, iminyango noma amawindi liphansi. Ngaphambi kokwakhiwa, qala uhlole ukuthi ngabe izidingo zokushisa eziphansi zamazinga wokwakha sezihlangatsheziwe yini, bese uzama ukugwema ukwakhiwa kwepulasitiki endaweni ephansi ngezinyathelo zokufaka ezingezinhle zokushisa.
5. Ukushisa komhlabathi okuphansi kungenza kube nzima ukunamathela ngokuphelele phansi kwepulasitiki nokunamathela. Ngenxa yethonya lokushisa, ijubane lokwelapha le-adhesive lihamba kancane.
6. Ngenxa yamazinga okushisa aphansi angaphakathi, phansi kwepulasitiki kungaqiniswa bese kushiswa kube ngamazinga ahlukahlukene.
7. Ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ngesikhathi sokushisa okuphansi, futhi izinyathelo ezilandelayo zokuphepha kufanele zithathwe ukugwema imiphumela yokwakhiwa okungahambi kahle.
8. Noma sekuqediwe ukwakhiwa kwepulasitiki, phansi kwepulasitiki kuzokwenziwa lukhuni bese kuthambile ngenxa yomehluko wokushisa phakathi kosuku nobusuku noma okunye umehluko okushisa.
9. Ngenxa yethonya lokushisa, ijubane lokupholisa lokunamathela lihamba kancane; ukuze kuvikeleke ipulasitiki kanye nokunamathela kokuqobeka ngemuva kokwakhiwa, kufanele kudingidwe kaninginingi kusetshenziswa umgibeli wokucindezela ukuze unamathisele ngokuphelele.
10. Gcina indawo yokubambelela neyapulasitiki esakhiweni sokwakha ngamazinga okushisa okwakha ngaphambi kokwakha; uma ngabe ikhoyili yePVC (isayithi inemibandela), vula i-tile ngangokunokwenzeka ukuze ubuyisele inkumbulo phansi ye-PVC.
11. Isikhathi esomile ebusika sicishe sibe yizikhathi ezingama-2-3 ngemuva kwehlobo; isikhathi esingeziwe sokoma kufanele sigcinwe okungenani amasonto angama-3-4.
Amayunithi wokwakha ubusika kufanele alandele ngokuqinile izidingo zokwakhiwa kwesakhiwo sePVC ebusika ekwakheni phansi kwepulasitiki, ukuze umsebenzi wokwakha uqedwe esakhiweni sokuqinisekisa ikhwalithi.
Amaphuzu ambalwa adinga ukunakwa ekwakhiweni kwephansi ebusika bePVC Okuqukethwe okuhlobene